Iya Komphakathi, Reverse Merger, Izinkampani ZakwaShell Zomphakathi Ziyatholakala
Ukuhamba esidlangalaleni kuyinqubo yokuthengisa amasheya amasheya, abebekade ngasese, kumalungu omphakathi jikelele. Le nqubo iyinkimbinkimbi, ilawulwa kakhulu futhi inenzuzo eziningi, yenza inkampani yakho ibe sesidlangalaleni:
Ikusiza ukhulise inkampani yakho ngokushesha ngokunikeza izinsiza ezengeziwe zezezimali.
Ikusiza ukuheha futhi ugcine abantu be-notch ephezulu ngemholo efanelekile (ngokusebenzisa izinketho zesitoko).
Khulisa inkampani yakho ngokushesha ngokuheha ibhodi labaqondisi elinolwazi, elinolwazi.
Khulisa imali ngokushesha futhi ngezindleko eziphansi.
Kwenyusa ukwanda kwezezimali kuwe nakubatshalizimali bakho.
Iqinisa imali futhi idala amasheya angathengiseka ongasetshenziselwa ukuthola ezinye izinkampani futhi akhe amasu okusebenza nezinye izinkampani.
Kwenyusa isilinganiso sakho sokukhula ngokwandisa amandla akho okuncintisana nezinkontileka ezinkulu.
Kungakhuphulwa ngokushesha inani lenkampani yakho.
Ifaka imali oyitshalile ebhizinisini lakho ngokuyenza ibaluleke kakhulu, ngaleyo ndlela ikhulisa i-ROI yakho yangasese.
Kwenyusa izinga lebhizinisi lakho ngaleyo ndlela kwenza kube lula ukuheha ibhizinisi elisha.
Uma usunenkampani yomphakathi singakusiza ukukhuphula inani lenkampani yakho kanye nokwenza inzuzo futhi sikusize uvikele izimpahla ezivela emthethweni.
Bese ukhumbula; akugcini ngokukhulisa imali. Kumayelana nokuqiniseka ukuthi
inkampani isebenza kahle futhi iphethwe. Abaphathi abaphezulu basebenzela ukuzuzisa i
abaninimasheya. Gcina intshisekelo yabo enhle engqondweni futhi bayobona isisusa sakho futhi abantu abaningi bazodonswa yinhlangano yakho. Umbono wesikhathi eside obalulekile hhayi owokudubula isikhathi esisodwa. Uzodinga inkampani eyakhiwe kahle, uhlelo lwebhizinisi olunengqondo nabantu abanolwazi lokulufeza. Noma ngabe use-US, Germany, China, Canada noma kwenye indawo, funa thina usizo.
Udinga usizo ini?
Ngabe ufuna ukukhulisa ukuthengisa kwakho?
Ngabe udinga ukugcina izindleko ziphansi?
Ngabe ufuna ukuthola amanye amabhizinisi futhi udinga ukuthola abantu abazohamba kahle?
Udinga uhlelo lwebhizinisi olungcono?
Kuthiwani ngokukhangisa nokumaketha? Dinga usizo?
Udinga uhlelo oluhle lokusekelwa kanye nohlu lwabantu abanolwazi?
Kuthiwani ngokuvikelwa kubantu “abanciphisa” isitoko sakho?
Ufuna ukwenza ibhizinisi nezinkampani ze-S&P 500?
Ufuna ukuthola igama lakho laphaya emphakathini ngendlela engabizi?
Ngabe ufuna ukwehla amashidi wepinki bese uqhubekela phambili ekushintshanisweni okukhulu?
Nakhu ukuthi ungaqala kanjani
Kukhona ilungiselelo lapho ungxhasa ngezimali inqubo “yokuhamba esidlangalaleni.”
IVisa, MasterCard, American Express ne-Discover nazo ziyamukelwa.
Inqubo futhi ingakunikeza ukufinyelela kwimalimboleko yokusayina ye- $ 50,000 ngaphakathi kosuku olulodwa (kuya ngokuvunywa kwababolekisi) futhi,
Izimalimboleko ezinkulu kakhulu ngokuya ngezimpahla nokungena kwemali uma ukusebenza kwakho kuphezulu futhi
Ezimweni eziningi, singakwazi ukuhlela ukuthi amaVenture Capitalists axhase inqubo yokuya emphakathini ngokuya ngokubuka kwawo amandla enkampani yakho.
Uma usuyithathile emphakathini inkampani yakho kukhona ithimba lonke lokudluliselwa esihlele ukukhuphula izinga lakho lempumelelo. Kunabantu esinobudlelwano obude obukhona esibasebenzisayo noma ebesizosebenzisa bona uqobo futhi senze kahle kwezinye izinkampani. Nalu uhlu oluyingxenye:
Ama-ejenti wokukhangisa owazi ukuthi yini ethola imiphumela engcono ngentengo ephansi.
Ochwepheshe ngokuhlanganiswa kokutholwa
Ezokusiza ukuthuthukisa ukuhweba kwebhizinisi nezinkampani ze-S&P 500
Sibe sebhizinisini iminyaka engaphezu kwe-100
Isipiliyoni sibalwa. Ukuhamba esidlangalaleni inqubo elawulwa kakhulu. Ngakho-ke, ufuna ukuncika kulabo abakusizayo. Kubalulekile ukuzizwa unethemba lokuthi bayayazi ins kanye nokuphuma kwenqubo ngokusebenzisa isipiliyoni esikhulu. Iqembu lethu ligxile ekusebenzeni ngaphakathi kwemithetho yezokuphepha futhi lenze indlela egqoke kahle yokunikela ngokushesha nangempumelelo.
Nazi ezinye izinzuzo kothile onquma ukuya esidlangalaleni:
Ihlanganisa up capital kanye nokuqina
Kukhulisa inani lebhizinisi.
Kulula kakhulu ukukhulisa imali lapho unenkampani yomphakathi.
Ungasebenzisa isitoko ukukhokhela izinsizakalo ezinjengokukhangisa, ukukhuthaza umkhiqizo, nokunye
izinsiza kanye nesitoko sezinye izinkampani.
Kulula kakhulu ukuthola ezinye izinkampani - ngokuthenga inkampani ngesitoko.
Izindaba ezimayelana nomphakathi
I-Direct Public Offering (DPO) ingaba nezinzuzo ezinkulu nge-IPO. Nge-IPO umuntu kufanele amemezele ukuthi inkampani izonyusa malini ngokuthengisa amasheya. Uma lelo nani lingaphakanyiswanga, umnikelo awukwazi ukuqedwa. Kodwa-ke, nge-DPO ayikho imikhawulo efanayo futhi kukhona ukuguquguquka okuningana ngoba akudingekile ukuthi ukhuphule inani lemali oyiphakamisayo ekunikezeni kwakho njengoba kuzodingeka wenze ku-IPO.
Ngakho-ke, uma uhlela noma ucabanga ukuya emphakathini, futhi ufuna ukwazi kabanzi ukuthi inqubo yokubhalisa ye-SEC isebenza kanjani, kufaka phakathi igobolondo lomphakathi noma ukubuyiselwa emuva, gcwalisa leli fomu ngakwesokunene futhi othile uzokuxoxa nawe lokhu. Siyabona ukuthi ufuna malini nokuthi ufuna ukuqala ukukhulisa imali enkulu kangakanani. Buza ukuthi ungahamba kanjani esidlangalaleni futhi ubuze ngokuhlanganiswa okuphambene. Usizo luyatholakala ezimemorandweni zokubekelwa ngasese (i-PPM)
ukuthola imali yembewu, imali yokuqala, abenzi bemakethe, izinkampani zamagobolondo nokuthi ungayithatha kanjani inkampani yakho esidlangalaleni. Imininingwane yokuthi ungayikhulisa kanjani imali njengenkampani yomphakathi ngokomthetho nangokuziphatha nayo iyanikezwa.
Lapho wonke umsebenzi usuqediwe, ibhizinisi lakho lingavulwa emphakathini futhi nebhizinisi lakho, ngenxa yalokho, liba yinkampani yomphakathi. Sikubamba ngesandla futhi sikuhambise enkambweni yezinyathelo zesinyathelo ngesinyathelo ngenqubo yokuba yinkampani ethengiswa esidlangalaleni. Abasebenzi bethu bokusekelwa ochwepheshe nabo bangakugcina uvuselelwa ukuthi ungakwenza kanjani ukuhlangana okungafani nenkampani egobekile yomphakathi. Umuntu angaya esidlangalaleni ngokuhlangana okubuyela emuva nenkampani yamagobolondo yomphakathi. I-DPO, noma kunjalo, imvamisa inketho ezikhethwayo kubantu abaningi.
Iya Emphakathini Ngokukhuthaza Okufanele kanye Nobudlelwano Batshalizimali
Ubudlelwano obuhle nabatshalizimali buba nesisusa sezinzuzo, isisemthethweni, kanye nesisusa sokuthula. Ngakho-ke, inkampani yethu ingakusiza ukuxhumana kahle nabatshalizimali nokukhuthaza isitoko. Ngokungafani nezinkampani ezizimele, inkampani yomphakathi efakwe kahle manje ingakhangisa ngeminikelo eqondile yomphakathi kumalungu omphakathi.
Ngenkampani yakho yomphakathi singakusiza ukuthi ubambe imali futhi ukhuphule imali eningi lapho ibhizinisi lakho lidinga khona ngokushesha nangokomthetho.
Singakusiza ukukhuthaza ibhizinisi lakho kwizithameli ezikhulu kunangaphambili.
Ungathengisa amasheya ngemisebenzi yokukhangisa. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa lokhu ukukhangisa kwamahhala futhi ukusebenzise ukwenza umhlaba wazi ukuthi uyinkampani yomphakathi. Abantu abaningi bazokwazi ngawe ukuze abantu abaningi bazokuthenga kuwe. Lokhu kuzokusiza ekuphokopheleni kwakho ukukhulisa imali enkulu ngoba abatshalizimali abaningi bazokwazi ukuthi isitoko senkampani yakho siyatholakala ngokuhweba.
Inqubo Ehamba Phambili Yomphakathi
Iningi labantu alijwayele ukuthi lihamba kanjani esidlangalaleni. Ngakho-ke, sikwenza kube lula. Imishwana efana nokunikelwa okuqondile komphakathi, ukunikela komphakathi kokuqala kuyaziwa kepha bambalwa abajwayelene nemininingwane yokuthi ungaqhubeka kanjani lapho ufika. Uyini umakhi wemakethe? Ukwenza kanjani ukuhlangana okuhlukile? Khulisa imali? Yakha inhlangano yomphakathi egobolondo? Leyo yimibuzo esiyiphendulayo futhi le yimisebenzi enganikezwa ngemuva kokushayela ucingo.
Enye yezinyathelo zokuqala ukugcwalisa ifomu lokubhalisa le-S-1 bese uligcwalisa nge
Ezokuphepha kanye neKhomishini Yokushintshanisa (i-SEC). Lapho nje sebevumile ukufakwa, amadokhumenti afakwa ku-FINRA, abakwaFineral Industry Regulatory Authority. Izinto eziza kuqala nezinqubo nge-IPO kanye nezinqubo ze-DPO zizophathwa ngendlela esebenzayo kanye nezinqubo zokuhlanganisa umphakathi zegobolondo, umthetho wokuhlunga we-15c211 nefomu i-8-K. I-EDGAR, emele ukubuthwa kwe-elekhthronikhi ye-elekhthronikhi, Ukuhlaziywa, kanye nokubuyiselwa kwemisebenzi igcwaliswa kahle ukuze inkampani yenkampani yamagobolondo yakheke, ukuhlangana okuphindaphindiwe kwenzeka kahle futhi imali yokuqala noma imali yokukhulisa iphakanyiswe ngempumelelo.
Njengoba sishilo phambilini esihlokweni, indlela ethandwayo imvamisa i-DPO (Direct Direct Offering). Thintana futhi sikwazi ukukunikeza imininingwane yamahhala ngalesi sihloko nokuthi ungakwenza kanjani ukuhlangana kabusha nenkampani yamagobolondo yomphakathi. Ngakho-ke, ungafunda ukuthi ungayithatha kanjani inkampani yakho esidlangalaleni ngaphandle kwezindleko zendabuko. Ngaphezu kwalokho, ungathola izeluleko zokuthi ungayithatha kanjani inkampani yakho esidlangalaleni nokuthi kungani kulula kakhulu ukukhulisa imali usebenzisa inkampani yomphakathi ngokungafani neyangasese.
Ukuphakamisa Isitoko Sakho - Akukho Okungcono Kunendaba Emnandi
I-IPO enhle imayelana nokuthengisa udaba lwakho. Ngokuyisisekelo, ukuthengisa okuhle kaningi kulungile
ukukhuluma izindaba, awuvumi? Enye yezinyathelo zokuqala ukusebenza izinsuku ezimbalwa ngendaba. Kugijime abanye abantu. Kamuva, esikhundleni sokucabanga ngemibono emidala efanayo, buyekeza izindaba zakho ngokuqhubekayo. Abantu bathenga ngemizwelo futhi bathethelele izinqumo zabo ngokunengqondo. Qiniseka ukuthi ufaka kokubili ukuqonda okunengqondo okwenza sizzle somqondo nesomzwelo esenza ama-molecule abatshalizimali aqhubeke. Xoxa udaba oluzokwenza abantu bakhulume.
Indaba Emnandi Kakhulu
Kukhona indaba eyodwa kuphela yotshela iqembu labangatshali bezimali be-IPO: Ngabe inkampani yakho izobenza kanjani imali enkudlwana elandelayo? Iningi labaphathi abakhulu kanye namalungu amaningi ebhodi asetshenziselwa ukwethula kumakhasimende. Kepha khumbula, ukuthi kubalulekile ukuthi ikhasimende lazi nokuthi yini umtshalizimali afuna ukukwazi ngokuvamile kuhluke. Ngakho-ke, ngaphezu kokukhuluma ngemikhiqizo yakho nokuthi yini ongayenza ngayo, lapho ukhuluma nabatshalizimali, khuluma nge-ROI yabo.
Ungaba nosizo, kepha ekugcineni, le ndaba kufanele ibhalwe nguwe. Lona ngumsebenzi we-CEO noma we-CFO. Ukuphinda, abantu bathenga ngomzwelo bese bethethelela ukuthengwa okunengqondo. Ngakho-ke, uma lendaba yomibili inengqondo futhi ivela enhliziyweni yakho, ngaleyo ndlela inencazelo ejulile neqiniso kuwe, izilaleli zakho zizokuzwa lokhu, zingashukunyiswa ukuba zithathe isinyathelo, futhi zingasivumela kalula isinqumo sazo.
Sisebenze nezinkampani ezimbili ezazimbili embonini yezobuchwepheshe. Omunye we-CEO ushise i-oyili yamaphakathi nobusuku alungiselela isethulo esinengqondo nenhliziyo. Isikhulu esiphezulu kwenye inkampani sithe abantu ababemaketha benze isethulo. Iminikelo yethulwe futhi yanikwa intengo ngosuku olulodwa. Eyokuqala, lapho i-CEO yayinenhliziyo yayo kulesi sethulo, yadlula ngaphezu kohla lwamanani ayo obekulindelekile. Elesibili lahlala phansi. Kunesizathu esihle salokhu.
Uma uke wabona ama-tryout okuqala embukisweni we-TV "American Idol," lapho amajaji abona khona umuntu ocula omunye ngemuva kwalapho, ubonile ukuthi uSimon Cowell uyanengeka lapho umuntu engena egqoke imvunulo noma esebenzisa enye indlela. Bafuna ithalente hhayi i-hype.
Abatshalizimali bezikhungo bayalingana. Bangabona iziphakamiso ezintsha ezinhlanu kuya kweziyishumi zokutshala imali nsuku zonke zeviki. Babone konke. Ngemuva kwesikhashana baba ngabakungabazi nabangabazayo futhi badinga ukuhlunga amatshe amaningi angenamsebenzi ukuthola izimbumbulu ezimbalwa zegolide. Isixhumanisi se-phony asisizi. Ukhiye usemizuzwini embalwa yokuqala yesethulo sakho. Yilapho iningi lizokwenza isinqumo. Cishe nokubaluleke kakhulu yimizuzu yokugcina ye-10-15 ngesikhathi sesigaba sokubuza nezimpendulo. Abatshalizimali bafuna ukubona ukuthi ubambelela kanjani lapho imibono yakho iphonselwa inselelo.
Nanku umbuzo ukuthi wonke umphathi we-CEO ubuzwa nini emendweni: “Yini enkulu yakho
inselelo? ”Ngamanye amagama,“ Yini ekugcina ebusuku? ”Indlela engcono yokuphendula ukuvuma izinkathazo zakho nokwazisa izilaleli ukuthi wenzani ukuxazulula izinkinga.
Iphrezentheshini yethu imizuzu eyi-45. Yilokho kuphela onakho. Ngakho-ke, lahla ibhomu ubanikeze ihlumela lakho elihle kakhulu ngemizuzu emithathu yokuqala. Lokho kuzobenza bafune ukuhlala phezulu futhi baqaphele ngesikhathi se-42 esilandelayo. Kungani wehlukile?
Nasi isibonelo esihle. U-CEO wenkampani eyakha i-robot floor cleaner ubekhuluma neqembu lalabo abebekade bengabatshalizimali ukuthi: “Mangiqale isethulo sakhe ngombuzo, Bangaki abantu lapha namhlanje abaake bahlanza phansi?” Wonke umuntu waphakamisa izandla. “Bangaki kini enithanda ukukwenza?” Azange ziphakanyiswe izandla. “Njengawe, kunezigidi zabantu emhlabeni wonke ezingakufuni ukuhlanza phansi izitezi zazo. I-ABC Robotic inomkhiqizo wokuxazulula leyo nkinga. "
Singakusiza kwakamuva mayelana nenqubo ye-IPO (Initial Public Offering), ukubuyisela emuva ukuhlangana, Rule 15c211, Regulation D, amagobolondo asobala nawomphakathi. Ngaphezu kwalokho, xhumana nathi ukuthola imininingwane kuma-Memorandums Wokubekwa Kwangasese (i-PPM), i-Rule 504, i-Rule 506, ukukhulisa imali yokuqalisa kanye nokuqalisa capital, ukuvikelwa kwempahla ezinkingeni zomthetho, kanye nokwakhiwa kwenkampani entsha e-US nakwamanye amazwe.
Kukhona ubuciko kuwo. Ukwenyusa imali kungaba yinhle. Sinemephu. Funda ukuthi kwenzekani lapho inkampani ihamba emphakathini futhi ibone ukuthi ingakusiza kanjani.
Uzofunda kabanzi ngokuthi inkampani ihamba kanjani emphakathini futhi uzizwe ukhululekile ukwenza isinqumo ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke, ukuthola eminye imininingwane nezincazelo kanye nezinyathelo zokubhekana nokubuyiselwa emuva, ukuhlangana kwegobolondo lomphakathi noma ukunikela okuqondile komphakathi (i-DPO), shayela inombolo ephezulu kuleli khasi. Ngokwemvelo, akukho lwazi oluqukethwe lapha okufanele luthathwe njengezomthetho, lwentela noma olunye usizo lobuchwepheshe. Uma kudingeka lokho izinsizakalo zommeli onelayisense kanye / noma i-accountant kufanele zifunwe.
Uma usukulungele ukuya emphakathini, xhumana nathi. Besisebenza kusukela ku-1906 futhi saziwa emhlabeni wonke njengabaholi ekwakhiweni kwenkampani nasemphakathini.